के गणतन्त्रमा महिलाहरु बलात्कृत हुनुपर्ने हो ? – www.janabato.com
के गणतन्त्रमा महिलाहरु बलात्कृत हुनुपर्ने हो ?
१३ भाद्र २०७५, बुधबार ०८:४२ August 29, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागी राजनीतिक क्रान्ति अनिबार्य छ । राजनीतिक क्रान्तिबिना महिला अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन र महिलाहरुमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य घटनाहरु रोकिदैन । त्यसकारण बलात्कार राज्य र राजनीतिसंग जोडिएको बिषय हो ।
आज देशमा प्रत्येक पल बलात्कारको घटना भइरहेका छन् । कुनै न कुनै किसिमले महिलाहरुमाथि हुने गरेको हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाका समाचारहरु विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेको छ । यसरी दिनानुदिन महिलाहरुमाथि भइरहने विभत्स घटनाहरु सुन्दा उदेक लाग्छ । गणतन्त्र भनिएको देशमा महिलाहरु किन सुरक्षित छैनन् ? राजनीतिक क्रान्ति सकियो भनिएको देशमा किन महिलाहरुमाथि दिनदिनै बलात्कार हुन्छ ? के पुरुषका लागी मात्र आएको हो गणतन्त्र ? के गणतन्त्रको उपहार महिलाहरु दिनदिनै बलात्कृत हुनु हो ? आज देशमा सर्वत्र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
हामी अहिले पनि छोरी भएर जन्मेपछि घरको दैलो नाग्नु हुन्न भन्ने समाजमा छौं । समाजमा महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने किसिमको रोग जीवित नै छ । महिलामाथि पहिलो हिंसा घरभित्रैबाट हुने गर्छ । छोरी मान्छे होस् या बुहारी मान्छे, घरबाहिर निस्कन हुन्न भन्ने किसिमकोे संकिर्णता अझै पनि हटेको छैन । सडकमा हिँडिरहेको महिलाहरुले सिधा नजर लगाएर कुनै अपरिचित पुरुषलाई हेर्दैमा त्यो पुरुष महिलाको खेदो खनिरहेको हुन्छ । त्यसलाई महिला हिंसा भन्ने कि नभन्ने त ?
अहिले त झन् पछिल्लो समयमा प्रत्येक दिन बालबालिकामाथि बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् । बलात्कारीले महिलामाथि भौतिक रुपमा मात्रै होइन, महिलाहरुको जीवन र सिंगो समाजमाथि बलात्कार गरिरहेको छ । कुनै सार्वजनिक स्थानहरुमा गाडीमा यात्रा गर्दा होस् या कुनै पनि स्थानहरुमा महिलाहरु पीडित हुनु परेको छ । यसवारे राज्य किन मौन छ ? यस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन घट्नुको साटो किन झन्–झन् बढिरहेको छ ? कैयौं घटनाहरु समाज वा आफन्तजनले के भन्लान् भनेर महिलाहरुले लुकाउन बाध्य छन् । के गणतन्त्र पनि विभेदकारी हुन्छ ? के हामीले खोजेको गणतन्त्र यस्तै हो ?
बलात्कारका घटनाहरु राज्यको चरित्रसंग सम्बन्धित छ । यो राज्यसत्ता महिलाहरुको हुन सकेन । केही महिलाहरु राज्यको ठूल्ठूला ओहडाहरुमा पुग्दैमा महिलाहरुको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण हो यो । राज्यले राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्नु हावादारी कुरा हो । महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागी राजनीतिक क्रान्ति अनिबार्य छ ।
आज देशमा महिला हिंसासंग सम्बन्धित हज्जारौं एनजिओ/आइएनजिओहरु संचालनमा छन् । अबौं डलर यही शीर्षकमा सकिन्छ । देशैभर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । महिला नामका पात्रहरु पनि प्रतिनिधि छन् । तर किन रोकिन्न महिलाहरुमाथि बलात्कार ? किन बोल्दैनन् महिला जनप्रतिनिधिहरु ? सभामुख, प्रधानन्यायधीस हुँदै राष्ट्रपति समेत महिला भएको भनिएको देशमा महिलाहरु किन असुरक्षित छन् ? प्रश्न गम्भीर छन् । तर छिटपुट बाहेक समाज मूलतः मौन छ । राज्य त झन् लाचारी छ । राज्य समाजवाद र समृद्धिको गफ लगाएर जनतालाई भ्रम मात्र दिइरहेको छ । त्यसकारण मलाई लागेको के हो भनेको महिलाहरुमाथि हुने विभिन्न बलात्कारका घटनाहरु राज्यको चरित्रसंग सम्बन्धित छ । यो राज्यसत्ता महिलाहरुको हुन सकेन । केही महिलाहरु राज्यको ठूल्ठूला ओहडाहरुमा पुग्दैमा महिलाहरुको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण हो यो । राज्यले राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्नु हावादारी कुरा हो । महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागी राजनीतिक क्रान्ति अनिबार्य छ । राजनीतिक क्रान्तिबिना महिला अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन र महिलाहरुमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य घटनाहरु रोकिदैन । त्यसकारण बलात्कार राज्य र राजनीतिसंग जोडिएको बिषय हो ।
कतिपय घटनाहरु यस्तो सम्म हुने गर्छ कि जुन बाहिर आउनै पाउँदैनन् । विभिन्न धाकधम्की र प्रलोभनका कारण घटनालाई गुपचुप राख्ने गरिन्छ । पीडित महिलाहरुले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन् । खै त यिनीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा ? के यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? यिनीहरुको लागि पनि उत्तिकै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो । अर्को कुरा मानौ कुनै महिला र पुरुषवीच प्रेम सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै पुरुषले विभिन्न गलत आरोपहरु लगाएर महिलाको बेइज्जत गर्छन् र कतिसम्म भने समाजले उक्त महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हुन जान्छ । यो महिलामाथि बलात हिंसा हो कि होइन ? के महिलामाथि हिंसा गर्न बलात्कार नै गर्नुपर्छ र ?
महिलाहरु पुरुषकै लागि ब्रत बस्छन् । छोरा जन्माउनु पर्छ भन्दै मन्दिर पुग्छन् । उनै पुरुषहरु बलात्कृत बालिकाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्छन् । साँझ श्रीमतिले उनै श्रीमानलाई ढोग्नुपर्ने, दिउँसो बलात्कारको विरोधमा सडकमा नारा लगाउने ! यो विरोधाभासपूर्ण पुरुष मानसिकता होइन र ? यसबारे महिलाहरु सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
आज राज्य महिलामैत्री छैन । कानुनहरु महिलामैत्री छैनन् । समाजले महिलाहरुमाथि हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको छ । त्यसैको शिकार महिलाहरु हुनुपरेको छ । राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेको व्यक्तिहरु महिलाहरुको अधिकारप्रति गम्भीर देखिएनन् । जसले जघन्य बलात्कार गरि दोषी ठहरिँदा समेत खुला छोडिदिने न्यायधीसहरु छन् । यसले गर्दा अझ यस्ता अपराधिक घटनाहरु दोहोरिएका छन् । अपराधीहरुको विरुद्धमा सडकमा उत्रनु मात्र मुख्य कुरा होईन बरु अब यस्ता घटना घटाउने अपराधीहरुमाथि राज्य कठोर हुनुपर्छ । दण्डा लगाएर मात्रै हुँदैन, समाजलाई सभ्य बनाउनेतिर सोच्नुपर्छ । यसवारे राज्यले पर्याप्त ध्यान पु¥याएको देखिदैन ।
यसर्थ आम नेपालीहरु यसरी सडकमा बोल्ने दिनको अन्त्य वा महिलाहरुले सुरक्षित भएको आभास हुन सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागी महिलाहरु राजनीतिक अधिकारपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसका लागी महिलाहरुले सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म महिलाहरु राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म यस्ता जघन्य घटनाहरु भईरहन्छन् । केही महिला पात्रहरु माथिल्लो निकायमा पुग्दैमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्नु महिलाहरुमाथि हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाहरुलाई अझ बढवा दिनु हो । त्यसकारण बलात्कारी वा पुरुषसत्तावादी गणतन्त्रको विकल्पमा महिला आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु आवश्यक छ ।
← देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य : सञ्जीव
छात्रामाथी दुव्र्यवहार गर्ने प्रिन्सिपल पक्राउ, अभिभावक आक्रोशित →
२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:४५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on अति विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक वितरण
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०५:११ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on बुटवलमा लुम्बिनी एक्स्पोको तयारी तीब्र